Weerar Xamaas ay ku qaaday Israa'iil - BBC Somali
Weerar Xamaas ay ku qaaday Israa'iil
Image caption Israa'iil ayaa dhallinyarada u diiday Masjidka inay galaan
Kooxda Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegatay masuuliaydda weerar ka dhacay magaalada Qudus, kaas oo hal qof uu ku dhintay sagaal kalana ay ku dhaawacmeen.
Qofka weerarka qaaday ayaa gaarisiiga oo xawaare aad u dheer ku socday dulmariyay ama jiirsiiyay dad marayay qad tareenada oo ku yaalla bariga magaalada Qudus, kaddibna waxa uu bir yar oo uu watay ku garaacay askar boolis ah oo ku sugnaa goobta. Ninkaas ayaa markii dambe la toogtay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in, Ibrahim al-Akari, uu ahaa askeri ka shaqeynaayay xuduudda. wuxuuna weerarkan uu la mid ahaa mid isbuucii hore ka dhacay magaalada Qudus.
Xamaas ayaa ninka weerarka qaaday ku sheegtay inuu yahay "geesi shahiiday" waxayna intaa ku dareen in ujeedada weerarka ay ahayd aargudasho, taas oo ay sheegeen inay uga jawaabayeen wax ay ku sheegeen weerarka Israa'iil ee masjidka barakeysa ee Al-aqsa, oo Yahuudda ay u yaqaanaa macbadka sare.